ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းရင် နာမည်ကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် သေပြီ
ရမ်ဆေး Ramsey ဂိုးသွင်းရင် နာမည်ကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ သေဆုံးတာက တိုက်ဆိုင်မှုလား၊ ကျိန်စာများလား
8 Oct 2018 . 3:27 PM
ကဏ္ဍအသီးသီးက နာမည်ကြီး Celebrity တွေ ရမ်ဆေး Ramsey နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုတောင်းနေကြတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ရမ်ဆေး ဂိုးမသွင်းဖို့ပါပဲ။ ကြမ္မာငင်တယ်လို့ပဲ ပြောရမလား၊ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲ ပြောရမလား၊ ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းရင် နာမည်ကြီးတစ်ယောက် သေတတ်လို့ပါ။ အခုလည်း ရမ်ဆေးရဲ့ ကျိန်စာဆိုးက မရပ်တန့်သေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က Vorskla နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲမှာ ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းပါတယ်။ နာမည်ကြီးထဲက ဘယ်သူသေဦးမလဲဆိုပြီး ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ အခုဆိုရင် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျော့ခ်ျဟာဘတ်ဝေါလ်ကာဘုရှ် George Herbert Walker Bush (အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျော့ခ်ျဝေါလ်ကာဘုရှ် George W. Bush ရဲ့ဖခင်) ကွယ်လွန်သွားပြန်ပါပြီ။ တကယ့်ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဂျော့ခ်ျဘုရှ် မတိုင်ခင်တုန်းကလည်း နာမည်ကြီး ရုပ်သံစီးရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Walking Dead ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ မင်းသားကြီး စကော့ဝီလ်ဆင် Scott Wilson ဟာ သွေးကင်ဆာရောဂါကြောင့် အောက်တိုဘာလ (၆)ရက်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အဲဒီနေ့ နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ ဖူလ်ဟမ်ကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းအပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် လူပုဂ္ဂိုလ် (၄)ဦးအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းရင် Cele တစ်ယောက်သေတတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Online ပေါ်မှာ အမြဲ Troll ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ရမ်ဆေးက အခုလိုပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ”ကျွန်တော် ဂိုးသွင်းရင် လူတစ်ယောက် သေတယ်ဆိုပြီး ရီစရာအကောင်းဆုံး ကောလာဟလသတင်းတွေကို ကြားသိခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေပါ” လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းအပြီး သေဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာ စတိဗ်ဂျာ့ဘ် Steve Jobs ၊ စတီဖင်ဟောကင်း Stephen Hawking တို့လို နာမည်ကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ .. ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းရင် နာမည်ကြီး Celebrity တစ်ဦး သေဆုံးတတ်တာက တိုက်ဆိုင်မှုလား၊ ကျိန်စာများလားဆိုတာတော့ . . .
ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းအပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးများ
တက်ဒ်ကနေဒီ (၂၀၀၉) – အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် တက်ဒ်ကနေဒီ Ted Kennedy ဟာ ပို့စ်မောက်ကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းအပြီး (၃)ရက်အကြာမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။
အိုစမာဘင်လာဒင် (၂၀၁၁) – မန်ယူနဲ့ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းအပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ အိုစမာဘင်လာဒင် Osama Bin Laden သေဆုံးခဲ့တယ်။
စတိဗ်ဂျော့ဘ် (၂၀၁၁) – စပါးနဲ့ပွဲမှာ ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းအပြီး (၃)ရက်အကြာမှာ စတိဗ်ဂျော့ဘ် Steve Jobs ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။
မူအမ်မာကဒါဖီ (၂၀၁၁) – မာဆေးလ်နဲ့ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲ မူအမ်မာကဒါဖီ Muammar Gaddafi သေဆုံးခဲ့တယ်။
၀စ်တနီဟောက်စတန် (၂၀၁၂) – နာမည်ကြီးအဆိုတော် ၀စ်တနီဟောက်စတန် Whitney Houston ဟာ ဆန်ဒါးလန်းအသင်းဘက်ကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းအပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ရေးဝီလီယံစ် နဲ့ ဘော်ရစ်ဘရီဇော့စကီး (၂၀၁၃) – နာမည်ကြီး ဘက်စကတ်ဘော ကစားသမား ရေးဝီလီယံစ် Ray Williams နဲ့ ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင် ဘော်ရစ်ဘရီဇော့စကီး Berezovsky တို့ဟာ ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းအပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလို ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါလ်ဝေါကာ (၂၀၁၃) – နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပေါလ်ဝေါကာ Paul Walker ဟာ ကာဒစ်ဖ်အသင်းကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းတဲ့ တစ်ရက်တည်းမှာပဲ သေဆုံးခဲ့တယ်။
ရော်ဘင်ဝီလီယံ (၂၀၁၄) – နာမည်ကြီးဟာသ သရုပ်ဆောင် ရော်ဘင်ဝီလီယံ Robin Williams ဟာ မန်စီးတီးဘက်ကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းပြီး နောက်တစ်ရက်မှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။
ဒေးဗစ်ဘိုဝီ (၂၀၁၆) – သီချင်းရေးဆရာ၊ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ဒေးဗစ်ဘိုဝီ David Bowie ဟာ ဆန်းဒါးလန်းကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။
အလန်ရစ်ခ်မန်း (၂၀၁၆) – ဗြိတိန်နာမည်ကျော် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အလန်ရစ်ခ်မန်း Alan Rickman ဟာ လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲမှာ ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းအပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။
နန်စီရေဂန် (၂၀၁၆) – အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ရော်နယ်လ်ရေဂန် Ronald Reagan ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ နန်စီရေဂန် Nancy Reagan ဟာ စပါးအသင်းကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းပြီး တစ်ရက်အကြာမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘရုစ်ဖော်ဆိုင် (၂၀၁၇) – နာမည်ကြီး ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘရုစ်ဖော်ဆိုင် Bruce Forsyth ဟာ လက်စတာဘက်ကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းအပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ကန်ဒေ့ါတ် နဲ့ စတီဖင်ဟောကင်း (၂၀၁၈) – အေစီမီလန်နဲ့ပွဲမှာ ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းအပြီး ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကန်ဒေ့ါတ် Ken Dodd နဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် စတီဖင်ဟောကင်း Stephen Hawking တို့ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။
အဲရစ်ဘရစ္စတိုး (၂၀၁၈) – ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ (၅)ကြိမ်ရခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး စက်ဝိုင်းမြားပစ် (Dart) ကစားသမား အဲရစ်ဘစ္စတိုး Eric Bristow ဟာ CSKA မော်စကိုကို ရမ်ဆေးဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ တစ်ရက်တည်းမှာပဲ သေဆုံးခဲ့တယ်။
စကော့ဝီလ်ဆင် (၂၀၁၈) – Walking Dead ရုပ်သံစီးရီးထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသားကြီး စကော့ဝီလ်ဆင် Scott Wilson ဟာ အောက်တိုဘာလ (၆)ရက်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာပဲ ဖူလ်ဟမ်ဘက်ကို ရမ်ဆေး ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
Photo:ShortList,Twitter,Daily Advent Nigeria,Town & Country Magazine
ရမျဆေး Ramsey ဂိုးသှငျးရငျ နာမညျကြျောလူပုဂ်ဂိုလျတှေ သဆေုံးတာက တိုကျဆိုငျမှုလား၊ ကြိနျစာမြားလား
ကဏ်ဍအသီးသီးက နာမညျကွီး Celebrity တှေ ရမျဆေး Ramsey နဲ့ ပတျသကျပွီး ဆုတောငျးနကွေတာ တဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ ရမျဆေး ဂိုးမသှငျးဖို့ပါပဲ။ ကွမ်မာငငျတယျလို့ပဲ ပွောရမလား၊ တိုကျဆိုငျမှုလို့ပဲ ပွောရမလား၊ ရမျဆေးဂိုးသှငျးရငျ နာမညျကွီးတဈယောကျ သတေတျလို့ပါ။ အခုလညျး ရမျဆေးရဲ့ ကြိနျစာဆိုးက မရပျတနျ့သေးပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနကေ့ Vorskla နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂျပှဲမှာ ရမျဆေးဂိုးသှငျးပါတယျ။ နာမညျကွီးထဲက ဘယျသူသဦေးမလဲဆိုပွီး ရငျတမမနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နတေုနျးမှာပဲ အခုဆိုရငျ အမရေိကနျသမ်မတဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ဂြော့ချြဟာဘတျဝေါလျကာဘုရျှ George Herbert Walker Bush (အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး ဂြော့ချြဝေါလျကာဘုရျှ George W. Bush ရဲ့ဖခငျ) ကှယျလှနျသှားပွနျပါပွီ။ တကယျ့ကို မယုံနိုငျလောကျအောငျပါပဲ။ ဂြော့ချြဘုရျှ မတိုငျခငျတုနျးကလညျး နာမညျကွီး ရုပျသံစီးရီးတဈခုဖွဈတဲ့ Walking Dead ထဲမှာ ပါဝငျခဲ့ဖူးသူ မငျးသားကွီး စကော့ဝီလျဆငျ Scott Wilson ဟာ သှေးကငျဆာရောဂါကွောငျ့ အောကျတိုဘာလ (၆)ရကျမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပွီး အဲဒီနေ့ နာရီပိုငျးအကွာမှာပဲ ဖူလျဟမျကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးခဲ့တယျ။
ဒီနှဈထဲမှာပဲ ရမျဆေးဂိုးသှငျးအပွီး သဆေုံးခဲ့တဲ့ နာမညျကြျော လူပုဂ်ဂိုလျ (၄)ဦးအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ရမျဆေးဂိုးသှငျးရငျ Cele တဈယောကျသတေတျတာနဲ့ပတျသကျပွီး Online ပျေါမှာ အမွဲ Troll ခံခဲ့ရတယျ။ အဲဒီအကွောငျးအရာနဲ့ပတျသကျပွီး ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးက အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ရမျဆေးက အခုလိုပွောခဲ့ဖူးတယျ။ ”ကြှနျတျော ဂိုးသှငျးရငျ လူတဈယောကျ သတေယျဆိုပွီး ရီစရာအကောငျးဆုံး ကောလာဟလသတငျးတှကေို ကွားသိခဲ့ရတယျ။ ဒါဟာ တကယျ့ကို ရူးကွောငျကွောငျနိုငျတဲ့ ပွောဆိုမှုတှပေါ” လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
ရမျဆေးဂိုးသှငျးအပွီး သဆေုံးခဲ့သူတှထေဲမှာ စတိဗျဂြာ့ဘျ Steve Jobs ၊ စတီဖငျဟောကငျး Stephen Hawking တို့လို နာမညျကွီးလူပုဂ်ဂိုလျတှေ ပါဝငျခဲ့ကွတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ .. ရမျဆေးဂိုးသှငျးရငျ နာမညျကွီး Celebrity တဈဦး သဆေုံးတတျတာက တိုကျဆိုငျမှုလား၊ ကြိနျစာမြားလားဆိုတာတော့ . . .
ရမျဆေးဂိုးသှငျးအပွီး သဆေုံးခဲ့တဲ့ နာမညျကွီးမြား
တကျဒျကနဒေီ (၂၀၀၉) – အမရေိကနျ အထကျလှတျတျောအမတျ တကျဒျကနဒေီ Ted Kennedy ဟာ ပို့ဈမောကျကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးအပွီး (၃)ရကျအကွာမှာ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။
အိုစမာဘငျလာဒငျ (၂၀၁၁) – မနျယူနဲ့ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးအပွီး နောကျတဈနမှေ့ာပဲ အိုစမာဘငျလာဒငျ Osama Bin Laden သဆေုံးခဲ့တယျ။
စတိဗျဂြော့ဘျ (၂၀၁၁) – စပါးနဲ့ပှဲမှာ ရမျဆေးဂိုးသှငျးအပွီး (၃)ရကျအကွာမှာ စတိဗျဂြော့ဘျ Steve Jobs ကှယျလှနျခဲ့တယျ။
မူအမျမာကဒါဖီ (၂၀၁၁) – မာဆေးလျနဲ့ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီးနောကျတဈနမှေ့ာပဲ မူအမျမာကဒါဖီ Muammar Gaddafi သဆေုံးခဲ့တယျ။
ဝဈတနီဟောကျစတနျ (၂၀၁၂) – နာမညျကွီးအဆိုတျော ဝဈတနီဟောကျစတနျ Whitney Houston ဟာ ဆနျဒါးလနျးအသငျးဘကျကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးအပွီး နောကျတဈနမှေ့ာ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ရေးဝီလီယံဈ နဲ့ ဘျောရဈဘရီဇော့စကီး (၂၀၁၃) – နာမညျကွီး ဘကျစကတျဘော ကစားသမား ရေးဝီလီယံဈ Ray Williams နဲ့ ရုရှားသိပ်ပံပညာရှငျ ဘျောရဈဘရီဇော့စကီး Berezovsky တို့ဟာ ရမျဆေး ဂိုးသှငျးအပွီး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ဆိုသလို ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
ပေါလျဝေါကာ (၂၀၁၃) – နာမညျကြျော သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ပေါလျဝေါကာ Paul Walker ဟာ ကာဒဈဖျအသငျးကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးတဲ့ တဈရကျတညျးမှာပဲ သဆေုံးခဲ့တယျ။
ရျောဘငျဝီလီယံ (၂၀၁၄) – နာမညျကွီးဟာသ သရုပျဆောငျ ရျောဘငျဝီလီယံ Robin Williams ဟာ မနျစီးတီးဘကျကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးပွီး နောကျတဈရကျမှာပဲ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။
ဒေးဗဈဘိုဝီ (၂၀၁၆) – သီခငျြးရေးဆရာ၊ အဆိုတျော၊ သရုပျဆောငျ ဒေးဗဈဘိုဝီ David Bowie ဟာ ဆနျးဒါးလနျးကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးပွီး နောကျတဈရကျမှာ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။
အလနျရဈချမနျး (၂၀၁၆) – ဗွိတိနျနာမညျကြျော ဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈတဲ့ အလနျရဈချမနျး Alan Rickman ဟာ လီဗာပူးလျနဲ့ပှဲမှာ ရမျဆေးဂိုးသှငျးအပွီး နောကျတဈရကျမှာ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။
နနျစီရဂေနျ (၂၀၁၆) – အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး ရျောနယျလျရဂေနျ Ronald Reagan ရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ နနျစီရဂေနျ Nancy Reagan ဟာ စပါးအသငျးကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးပွီး တဈရကျအကွာမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
ဘရုဈဖျောဆိုငျ (၂၀၁၇) – နာမညျကွီး ဟာသသရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ဘရုဈဖျောဆိုငျ Bruce Forsyth ဟာ လကျစတာဘကျကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးအပွီး တဈပတျအကွာမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
ကနျဒေ့ါတျ နဲ့ စတီဖငျဟောကငျး (၂၀၁၈) – အစေီမီလနျနဲ့ပှဲမှာ ရမျဆေး ဂိုးသှငျးအပွီး ဟာသ သရုပျဆောငျ ကနျဒေ့ါတျ Ken Dodd နဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျ စတီဖငျဟောကငျး Stephen Hawking တို့ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။
အဲရဈဘရစ်စတိုး (၂၀၁၈) – ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ (၅)ကွိမျရခဲ့တဲ့ နာမညျကွီး စကျဝိုငျးမွားပဈ (Dart) ကစားသမား အဲရဈဘစ်စတိုး Eric Bristow ဟာ CSKA မျောစကိုကို ရမျဆေးဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ တဈရကျတညျးမှာပဲ သဆေုံးခဲ့တယျ။
စကော့ဝီလျဆငျ (၂၀၁၈) – Walking Dead ရုပျသံစီးရီးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့ဖူးတဲ့ မငျးသားကွီး စကော့ဝီလျဆငျ Scott Wilson ဟာ အောကျတိုဘာလ (၆)ရကျမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပွီး နာရီအနညျးငယျအကွာမှာပဲ ဖူလျဟမျဘကျကို ရမျဆေး ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။